Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.2.2 geli karin
Xogta ay hayaan ganacsiga iyo dawladaha waa adag tahay cilmi si ay u helaan.
In May 2014, US Agenda Amniga Qaranka furay xarun xogta ku yaalla miyiga Utah in uu leeyahay magac sirgaxan, waxay Sirdoonka Community Comprehensive Qaranka ee Amniga Internetka Initiative Center Data. Si kastaba ha ahaatee, xarunta macluumaadka this, taas oo uu iman in loo yaqaan Xarunta Data Utah ee, la sheegay in awoodda lala yaabo. Wararka qaar ayaa sheegay in Xarunta Data Utah waa ay awoodaan in ay ku kaydiso oo loo farsameeyo dhammaan noocyada isgaarsiinta oo ay ku jiraan "ka kooban dhamaystiran oo emails gaarka ah, wicitaanada telefoonka gacanta, iyo raadinta Google, sidoo kale jiray cayn kasta oo xogta shakhsiga rasiidhada xusus-la dhigto, itineraries safarka , dukaanka iibsadaan, iyo digital `qashin kale jeebka '" (Bamford 2012) . Waxa intaa dheer in walaac ururinta ku saabsan nooca xasaasi ah inta badan macluumaadka lagu qabtay xogta weyn, taas oo lagu tilmaami doonaa dheeraad ah hoos, Center Data Utah waa tusaale ba'an of il qani xogta in uu yahay gaari karin in cilmi. More guud ahaan, ilo badan oo xogta weyn in uu noqon doono mid waxtar leh in ay cilmi yihiin gacanta iyo xayiraad by dawladaha (tusaale ahaan, macluumaadka canshuurta iyo xogta waxbarashada) iyo shirkadaha (tusaale ahaan, su'aalo si aad u raadiso matoorada iyo phone call Meta-data). Sidaa darteed, macluumaadka, kuwaas ma noqon doonto isla markiiba la heli karo si cilmi jaamacadaha, iyo inta badan xitaa lama heli karo si cilmi in dawladaha ama shirkadaha doonaa.
In aan waayo-aragnimo, cilmi badan oo ku salaysan jaamacadaha fahmi isha of this helitaan. Xogtan ma yihiin geli karin sababtoo ah dadka shirkadaha iyo dowladaha waa doqon, caajis, ama ka leheyn. Saas ma aha, waxaa jira halis ah oo sharci ah, farsamo, ganacsiga, iyo caqabadaha anshaxa in looga hortago in ay helaan xogta. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah heshiisyada shuruudaha-of-adeegga websites kaliya oggolaadaan xogta loo isticmaalo by shaqaalaha ama in la hagaajiyo adeegga. Sidaas foomamka qaar ka mid ah la wadaago xogta dacwadaha sharciga ah ka macaamiisha soo bandhigaan yaabaa shirkadaha. Sidoo kale waxaa jira khataro la taaban karo ganacsiga shirkadaha ku lugta leh xogta la wadaago. Isku day inaad qiyaaso sida dadweynaha uga jawaabi doonto haddii xogta search shakhsi filaan ah daadatay oo ka soo baxay Google oo qayb ka ah mashruuc cilmi-jaamacadeed. Noocan oo kale ah jebinta xogta ah, haddii xad-dhaaf ah, xitaa waxaa laga yaabaa in halis ah jiritaanka shirkadda. Sidaas Google-iyo ugu weyn shirkadaha-waa mid aad u halis-naceen ku saabsan macluumaadka la wadaago cilmi.
Dhab ahaantii, waa kuwa meel kasta si ay u bixiyaan helitaanka xaddi badan oo data ogyahay sheekada Abdur Chowdhury. Sanadkii 2006, markii uu ahaa madaxa cilmi-baarista AOL, uu si ula kac ah la sii daayay waxa uu u maleeyay ayaa qarsoodiya weydiimo search ka 650,000 users AOL bulshada cilmi. Ilaa hadda sida aan u sheegi kartaa, Chowdhury iyo cilmi ee AOL lahaa niyad wanaagsan oo ay u malaynayeen in ay qarsoodiya xogta. Laakiin, waxay ahaayeen khalad. Waxaa la ogaaday in si deg deg ah xogta ay yihiin kuwo aan sida qarsoodiga ah sida cilmi u maleeyay, iyo suxufiyiinta ka New York Times ay awoodaan in ay aqoonsadaan dadka in dataset ee fudayd (Barbaro and Zeller Jr 2006) . Marka dhibaatooyinkan laga helay, Chowdhury saaro xogta ka soo website AOL ee, laakiin waxa uu ahaa mid aad u soo daahay. xogta ayaa la reposted on websites kale, iyo waxa laga yaabaa inay weli laga heli doonaa marka aad kitaabkan akhrintiisa. Sababta oo ah isku day in ay wadaagaan xogta bulshada cilmi, Chowdhury la ceyriyay, iyo sarkaal technology madax AOL ayaa is casilay (Hafner 2006) . Sida tusaale ahaan tani waxay muujinaysaa, faa'iidooyinka shakhsiyaadka gaarka ah gudaha ee shirkadaha si loo fududeeyo helitaanka xogta waa quruxsan yar iyo Arinta ugu xun ee ay tahay mid laga cabsado.
Research karo, si kastaba ha ahaatee, si ay u helaan xogta in uu yahay gaari karin in dadweynaha guud. Dawladaha waxay leeyihiin qaabab in cilmi-raaci karaan inaad codsato helitaanka, iyo sida tusaalayaasha ka dib in this cutubka show, cilmi mararka qaarkood heli kartaa helitaanka xogta shirkadaha. Tusaale ahaan, Einav et al. (2015) iskaashi la cilmibaadhe ee Arbacada ah inaad wax ka barato bixisay fiidda digital ka Xaraashyada online. Waxaan ka hadli doonaa badan oo ku saabsan cilmi-baaris ah in laga wada shaqeyn this yimid ka dib cutubka (Qaybta 2.4.3.2) ah, laakiin aan u xuso hadda, sababtoo ah waxaa lahaa afar oo dhan ah maaddooyinka in aan arko in iskaashi guul: xiisaha cilmibaadhe, awood cilmi-, xiisaha shirkadda, iyo awoodda shirkadda. In si kale loo dhigo, Einav iyo asxaabtii ahaayeen xiiso iyo awood waxbarasho Xaraashyada online. Oo, Arbacada ah ayaa sidoo kale ahaa. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan arkay iskaashiga badan oo suurto gal ah u gudheen, maxaa yeelay, mid cilmi ama shirkad u baahnaydeen mid ka mid ah maaddooyinka kuwan.
Xitaa haddii aad awood u yeeshaan iskaashi la ganacsi, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah khasaaraha idiin. First, su'aalaha aad weydiin kartaa xogta la tahay in la xadidaa, Shirkadaha ayaa u muuqata in ay u ogolaadaan in cilmi-baaris laga yaabo inuu iyaga u eeg xun. Second, malaha ma waxaad awoodi doontaa in aad la cilmi kale, taas oo macnaheedu yahay in cilmi kale ma awoodaan si loo xaqiijiyo iyo kordhiyo natiijooyinka waxay noqon doonaan wadaagno xogtaada. Dheeraad ah, iskaashi, kuwaas oo abuuri kara ugu yaraan muuqaalka kore ee colaadaha ka mid ah xiisaha, halkaas oo ay dadku u malaynayso in natiijada ayaa saamayn ku iskaashiga aad. All of khasaaraha kuwaas oo wax laga qabto kara, laakiin waxaa muhiim ah in la cadeeyo in la xogta aan waa ay heli karaan qof kasta oo shaqo lahaa upsides iyo khasaaraha labada.
In kooban, badan oo data weyn waa geli karin in ay cilmi. Waxaa jira halis ah oo sharci ah, farsamo, ganacsiga, iyo caqabadaha anshaxa in looga hortago in ay helaan xogta, iyo caqabadahaas ma tegi doonaa. dawladaha National guud ahaan ku adkeeyey hanaanka awood u helaan xogta, laakiin habka uu noqon karaa mid ad hoc heer gobolka iyo degmada ee. Sidoo kale, mararka qaar, cilmi kartaa lamaanahaaga shirkadaha si ay u helaan xogta ay helaan, laakiin tani waxay abuuri karaan noocyo kala duwan oo dhibaatooyin cilmi.